रिपोर्ट | Sagarmatha TV
क्वारेन्टाइनमा उपचारका लागि खटिएका स्वास्थ्यकर्मी कुटिए
बैतडी । बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा उपचारका लागि खटिएका एक स्वास्थ्यकर्मी कुटिएका छन् । पालिकाको ५ नम्बर वडामा रहेको भूमिराज मावि क्वारेन्टाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी करनसिंह धामी कुटिएका हुन् । क्वारेन्टाइमा राखिएका आफ्‍ना एक आफन्तले किन राखेको भन्दै स्थानीय नरेन्द्र जागरीले अहेब धामीलाई कुटपिट गरेका हुन्। बुधबार पालिकाले भारतबाट फर्केका ७ जनालाई सोही विद्यालयमा राखेको थियो। […]
भारतमा कोरोनाका कारण १२ जनाको मृत्यू, संक्रमितको संख्या ६ सय ५० नाघ्यो
काठमाडौं- छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ६ सय नाघेको छ । एकै दिन १ सय २१ जनामा संक्रमण देखिएको छ । विहीबार विहानसम्म भारतमा संक्रमितको संख्या ६५७ पुगेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार भारतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १२ पुगेको छ। बुधबार मध्य प्रदेशमा एकजनाको मृत्यु भएको थियो । […]
वेलायती राजकुमार चार्ल्सलाई कोरोना संक्रमण
एजेन्सी । वेलायती राजकुमार चार्ल्सलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ । वेलायती राजकुमार चार्ल्सलाई कोरोना परिक्षणका क्रममा पोजेटिभ देखिएको बकिङ्घम दरबारले जानकारी गराएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । कोरोना संक्रमण देखिएपछि राजकुमार चाल्स सेल्फ आइसोलेसनमा स्कटल्याण्डमा बसेको सिएनएनले उल्लेख गरेको छ ।
लकडाउनका बेला अटेर गर्ने तीनसय बढि सवारी साधन नियन्त्रणमा
काठमाडौ । कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउन उल्लंघन गर्ने ३ सय २ सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । अटेर गरी लकडाउन उल्लंघन गरी सञ्चालन गरेका सवारी साधनलाई विभिन्न स्थानबाट ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको महाशाखाले जनाएको छ । अत्यावश्यक सेवा र पासका सवारी साधन मात्रै चल्न पाउने, अन्य सवारी साधनलाई नचलाउन […]
मंगलबारबाट नेपाल पूर्ण रूपमा लकडाउन गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि घरबाट बाहिर निस्कन रोक लगाएको छ । कोरोना संक्रमणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको सोमबार बसेको बैठक भोलि विहान ६ बजेबाट एक सातासम्मका लागि घरबाट बाहिर निस्कन रोक लगाएको हो । खाद्यान्न र अत्यावश्यक बस्तु ढुवानी गर्ने बाहेक अरु सवारी साधन पनि चलाउने नपाइने निर्णय गरेको छ । अत्यावश्यक […]
चितवन पनि लकडाउन, बाहिरी जिल्लाबाट प्रवेश रोक
चितवन । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट जोगिन बाहिरी जिल्लाबाट आएका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई चितवन प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । सरकारले सोमबारदेखि लामो दुरीको सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएपछि अन्य जिल्लबाट आएका सार्वजनिक सवारी साधनहरुलाई चितवन प्रवेशमा रोक लगाइएको हो । चितवन प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाहरुमा प्रहरी तैनाथ गरि बाहिरी जिल्लाबाट आएका यात्रुबाहक बसहरुलाई जिल्ला […]
कोरोना त्रास : अर्घाखाँची जिल्ला ‘लकडाउन’ गर्ने निर्णय
अर्घाखाँची । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अर्घाखाँची जिल्लालाई ‘लकडाउन’ गरिने भएको छ । सोमबार राति १२ बजेबाट अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि अर्घाखाँची जिल्ला ‘लकडाउन’ हुने भएको हो । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले जिल्लालाई ‘लकडाउन’ गर्ने निर्णय गरेको […]
कोरोनाको विश्वव्यापी प्रभाव : संक्रमितमध्ये एक लाख बढि उपचारपछि निको
काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने क्रम रोकिएको छैन । नेपालमा समेत एकजनामा कोरोना भाइरस देखिएको छ । फ्रान्सबाट फर्किएकी एक नेपाली युवतीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो । कोरोना भाइरसको संक्रमणको जानकारी दिने वल्डमिटरका अनुसार संसरभरी केहीबेरअघिसम्म ३ लाख ४१ हजार संक्रमित रहेका छन् । जसमध्ये १४ हजार बढिको मृत्यु […]
वीरगञ्जका शिव रुंगटालाई कोरोना संक्रमणको आशंका, परिवार सेल्फ आइसोलेशनमा
पर्सा । वीरगञ्जका उद्योगी शिव रुगटालाई कोरोना संक्रमणको आशंकापछि उनका परिवारका सबै सदस्यलाई सेल्फ आइसोलेशनमा राखिएको छ । भर्खरै मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएका रु‌ंगटालाई कोरोनासँग मिल्दाजुल्दा लक्षण देखिएपछि उपचारका लागि भारतको पटना पुगेका छन् । पटनामा उनलाई कोरोना भएको हो कि हैन भनेर पीसीआर परिक्षणका लागि आवश्यक परीक्षण गरिएको छ । तर त्यसको रिपोर्ट आउन अझै […]
कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १३ हजार नाघ्यो, ३ लाख ६ हजार बढी संक्रमित
काठमाडौं- कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को सङ्क्रमणका कारण अहिलेसम्म विश्वभर ज्यान गुमाउनेको संख्या १३ हजार नाघेको छ । सङ्क्रमित ३ लाख ६ हजार ६ सय ७७ मध्ये अहिलेसम्म १३ हजार १७ जनाको ज्यान गएको छ । ९४ हजार ७ सय ९८ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। सबैभन्दा धेरै इटलीमा ४ हजार ८ सय २५ जनाको ज्यान गएको […]
बजेट भाषण : के–केमा बढ्यो कर ?
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब बजेट विनियोजन
आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड
काठमाडौंमा ३ वटा फ्लाईओभर र सुरुङ्ग मार्ग निर्माण गरिने
सुरक्षाकर्मीको पोशाक र जुत्ता स्वदेशमै बनाइने
माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीलाई २ अर्ब ७० करोड छात्रवृति
मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क बिजुली
नेपालमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनी स्थल बनाइने
दिवा खाजा कार्यक्रम देशभर लागू गर्ने घोषणा
दुध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाइने
विदेशबाट फर्कनेलाई खेतीमा आकर्षित गर्न भूमि बैंकको स्थापना हुने
बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य, कृषिमा पनि बजेट बढ्यो
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९० अर्व ६९ करोड रकम विनियोजन
महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविकाको यातायात खर्च दोब्बर
‘क’ वर्गका बैंकले हरेक शाखाबाट १० जनालाई सहुलियत ऋण दिनैपर्ने
चुरोट र गुट्काको कर बढ्यो
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, कहाँ कति विनियोजन ? पढ्नुहोस पूर्णपाठ
मूलपानी क्रिकेट मैदानमा फेरि विवाद
सबै जिल्ला सदरमुकामलाई सडक सञ्जालमा जोडिने
खेलकुदको बजेट घट्यो
महाकाली सिचाइँ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको बनाइने